यसपालीको दशैंमा नयाँ नोट पाइन्छ ? « Safal Post
यसपालीको दशैंमा नयाँ नोट पाइन्छ ?
हरेक वर्ष दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालीको दशैंमा के गर्ला ? धेरैलाई यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण नयाँ नोट वितरण हुँदैन कि भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
सधैं झैं यसपाली पनि नयाँ नोट वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तर कोरोनाले कत्तिको असर गर्ला भनेर अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशन रेवति नेपाल अहिले नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ नोट छपाइ भएर आइरहेको बताउँछन् ।
नयाँ नोट वितरण गर्ने नगर्ने वा के-कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए । अझै दशैं आउन एक महिना भन्दा लामो समय बाँकी रहेका कारण अहिले कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘दशैं आउन समय छ, हामी असोज १५ गतेतिर के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले निर्णय गर्नेछौं’ विभागीय प्रमुख नेपालले भने ।